कोभिड युनिफाइड अस्पताल प्रमुखको सरुवामा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप, लोहनीको सरुवा रोकियो Ukeraa – Latest and featured news from Nepal.
कोभिड युनिफाइड अस्पताल प्रमुखको सरुवामा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप, लोहनीको सरुवा रोकियो
डा. गुणराज लोहनी
काठमाडौं: कोभिड युनिफाइड अस्पताल (वीर अस्पताल)को कर्मचारी सरुवामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हस्तक्षेप गरेका छन्। मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा हस्तक्षेप गर्दै उनले डा. गुणराज लोहनीको वीरमा भएको सरुवा रोकेका हुन्।
बिपी प्रतिष्ठानका डाक्टर कमिसनमा, बिरामी ऋणमा
प्रधानमन्त्रीदेखि माओवादीसम्मको हस्तक्षेपले 'बिग्रियो वीर'
यसअघि देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको निर्णयमा समेत हस्तक्षेप गरेर वीरमा १०औं तहका डा. भुपेन्द्रकुमार बस्नेतको सरुवा गराएका थिए।
स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले भुपेन्द्रको स्थानमा डा. लोहनीको सरुवा गर्ने निर्णय गरेका थिए। लगत्तै वीरका केही कर्मचारी लोहनीविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। उनीहरूले डा. लोहनी वीर विरोधी भएको दावी गर्दै आन्दोलन गरेका थिए।
कर्मचारीको आन्दोलनका कारण बुधवार लोहनी कार्यालय जान सकेनन्। उनी ट्रमामा पुगेर फर्किएका थिए।
बुधबार नै कांग्रेसनिकट केही चिकित्सकले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर आफ्नै पार्टीको सरकार हुँदा पनि अन्यायमा पर्नु परेको भन्दै भुपेन्द्रको पक्षमा लविङ गरेका थिए। भेटमा सहभागी एक चिकित्सकका अनुसार मन्त्री खतिवडाले सल्लाहै नगरी निर्णय गरेको भन्दै यसबारे बुझ्ने बताएका प्रधानमन्त्रीले पछि निर्णय रद्द गर्न निर्देशन दिएका थिए।
यसअघि कोभिड युनिफाइडमा डा. रुद्र मरासिनीको सरुवाको निर्णय हुँदा पनि डा. बस्नेतले आरजु राणाको सहयोगमा आफ्नो सरुवा गराएका थिए। वीरमा कार्यरत रहँदा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा विवादित बनेका बस्नेत पछिल्लो समय रद्द भएको विज्ञापनमा बढुवाको सिफारिस भएका थिए।
२०७८ पुष २९ गते १२:२१ मा प्रकाशित
अस्पताल भर्ना हुने अधिकांश संक्रमित पाका र दीर्घरोगी, अस्पतालमा छैन भीड, जटिलता पनि कम
२०७८ माघ १३ गते ८:५७ मा प्रकाशित
टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा भर्ना हुने संक्रमित पनि पाको उमेरका व्यक्ति र दीर्घरोगी नै भएको अस्पतालका प्रमुख कन्सल्ट्याण्ट फिजिसियन डा. विमल शर्मा....
महामारीको मौका छोपेर सिटामोलको मूल्य बढाउने कसरत, भारतमा तस्करी भएकाले अभाव भएको उत्पादकको दाबी
२०७८ माघ १२ गते १४:५९ मा प्रकाशित
औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसी सिटामोल अत्यावश्यक औषधिको सूचीमा पर्ने भएकाले उत्पादन अनुमति लिएका उत्पादकले सिटामोल उत्पादन रोक्न नपाउने बताउँछन्। 'सिटामोल नबनाउने कम्पनीलाई....
२०७८ माघ ०७ गते १२:२४ मा प्रकाशित
खुट्टाको अप्रेसनमा लगाउने नेलको विषयमा डाक्टरहरूबीच झगडा भएको ललितले सुने। हाडजोर्नी विभाग टिम ‘ए’ का प्रमुख रोशनकुमार शाह कलवारले खोक्रो नेल प्रयोग नगर्ने अड्डी लिएपछि....
कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट देखिन सक्छ: डब्ल्यूएचओ
२०७८ माघ ०५ गते २०:०३ मा प्रकाशित
उनले ओमिक्रोन यसअघिको डेल्टाभन्दा कम जटिल भए पनि बेवास्ता नगर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका छन्। ओमिक्रोनका कारण मानिसहरू अस्पताल भर्ना भइरहेको, मत्यु पनि भइरहेको र स्वास्थ्य केन्द्रमा....
पूर्वराष्ट्रपति यादवको नाडीको लिगामेन्ट च्यातियो, ट्रमामा गरे सिटी स्क्यान
२०७८ माघ ०४ गते १४:०६ मा प्रकाशित
उनका अनुसार हाल यादव अस्पतालबाट फर्किसकेका छन्। उनलाई पूर्णतया निको हुन दुई साता लाग्ने डाक्टर दत्तले बताएका छन्। 'उहाँलाई ह्रिष्ट जोइन्टमा चोट लागेको रहेछ, लिगामेन्ट....